Nhema Chishanu LxA: ese akanakisa linux madhiri | Linux Vakapindwa muropa
Nhema Chishanu LxA: ese akanakisa linux madhiri
Kana iwe uchinge watopindwa muropa neLinux uye uine makomputa nemidziyo ine kugovera, neChishanu chitema Unogona kuve mukana wakanaka kuti uzvigadzirisezve nenhau mumba mako kana mukambani yako. Uye kana usati watora nhanho uye usati waedza Linux, ndeupi mukana uri nani pane uyu? Iwe unenge uine huwandu hwezvigadzirwa nemidziyo pamutengo wakanaka nekutengesa kwakasimba kunoitwa nezvitoro mumhemberero iyi yatakateedzera kubva kuUnited States. Pamusoro pezvo, izuva rakanaka rekutenga kwako zvipo zveKisimusi uye chengetedza zvishoma, pamusoro pekuve nazvo nenguva (iwe unoziva kuti nehuwandu hwemirairo inoitwa yezororo, mabasa ekuendesa anotora nguva. ..).
Ndokusaka muchinyorwa chino ticha taura nezve zvimwe zvezvitoro nemidziyo ine zvakanakisa uye zvemhando mitengo zvidzoreso zvatakaona, ehe zvese zvinowirirana nechero kugoverwa kweGNU / Linux kana zvine chekuita nenyika yeLinux uye mahara software. Uye ndevapi zvipo zvakanakisa linuxeros iyo yatinogona kuzvipa isu kana kupa kune vamwe? Zvakanaka ngatisvike pazviri:
SlimBook CLASSIC v2: Laptop iyo inouya neunofarira LInux yekuparadzira pre-yakaiswa. Iyo inoyevedza, yakajeka, ine simba uye ine hupfumi dhizaini iyo iwe yaunogona kutenga ikozvino yakachipa kwazvo nekuda kwezvikuru zvakadzikira zvinosvika ku € 100 iyo SlimBook inogadzira muchitoro chayo chepamhepo cheBlack Chishanu. Ehezve iwe unogona zvakare kushanyira kune zvakasara zvigadzirwa, senge KATAMA malaptop kana iyo Pro…, iyo inozobatsirwawo neyakadzikira.
UAV Dome: ivo zvakare vane zvinonakidza zvinopihwa, uye kusvika munaNovember 30, kutumira kuchavewo kwemahara. Uye pakati pezvigadzirwa zvaro, Domo yakwezva kutarisa kwedu, uko kunouya neUbuntu kana Mint mukati me miniPC inovanza mukati mehukuru kwazvo.
Samsung Glaxy S8 Plus mahara: iwe unogona kusevha inopfuura € 100 pakutenga kweiyi inoshamisa yazvino chizvarwa chizvarwa smartphone nePrimiyamu uswa neiyo Android 7.0 Nougat inoshanda sisitimu yakavakirwa paLinux kernel, sekuziva kwako ... Unogona zvakare kusarudza kubva kune akati wandei anowanikwa mavara.
Amazon Fire piritsi uye Kindle: Amazon ine piritsi rayo umo iwe uchazowana zvimwe zvidzikiso izvozvi zveBlack Chishanu, kunyangwe nokutendeseka ivo vanga vaine nekutengesa kwenguva yakati. Ichokwadi kuti haina kubva paiyo Android vhezheni yeGoogle, asi inoshandisa shanduko yeiyi inoshanda sisitimu. Pamari shoma iwe unenge uine piritsi kana anopfuura anodhura ebook muverengi uye uine mukana wekuwana kune Prime zvirimo.
Mhepo mitambo yemavhidhiyo: Uye zvevatambi vemitambo, iwe unotoziva kuti makore mashoma apfuura anga achimhanya-mhanya maererano nezviri mukati meGNU / Linux, saka ndeipi nzira iri nani pane kuzvipa mutambo wevhidhiyo inoenderana neLinux kuti ufare uri mwana paKisimusi ... Iwe unotoziva kuti iyo Valve yechitoro inowanzo kupa madhesiki uye mapakeji ekuchengetedza, asi Nhema Chishanu ichave iri yakakosha nguva yekutenga kwako.
Zvibate pachako uye ita Nhema Chishanu chete ive nezita!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Nhema Chishanu LxA: ese akanakisa linux madhiri
Maitiro ekuvandudza kubva Fedora 26 kuenda Fedora 27